Saadaal Irmaan | allsanaag
Samaha iyo xummaantu waa kala gooni oo aan marna la isku khaldi Karin, oo aan weligood la simi Karin, oo isku ah lid. Dadka qaar waxaa ilaahay ku ilhaamiyey oo u fududeeyey garashada iyo fahamka iyo ku dhaqanka wannaaga iyo samaha, halka kuwa kale laga indhasaabay samaha iyo wannaaga oo aad moodo in lagu gardaadiyey xumaanta iyo garasho la’aanta oo marwalba magan u ah maclinka Ibliiska. Had iyo goor ibliiska waxa uu kula faqaa inay dhibta iyo xumaanta casumaan oo dhabta ku qabtaan sidii ilma yar oo dhawaan dhashay, weliba araweeliyaan taasoo mar walba iyo wakhti walba u noqota caado iyo mihnad ay ku shaqaystaan haddaba maxaa kala sooca xumaanta iyo samaha oo kala shaandheeya ama kala hufa jawaabtu waa caqliga fayow ama saliimka ah.
Garaadka iyo fahamka asalkiisu kuma xidhna inaad jaamacaddo kasoo baxday ama aadan waxba baran oo aqoon aadan lahayn, laakiin waa hibo iyo hadyada ilaahay ku manaysto qofka uu doono. Haddaan hoos ugu yar daadego ujeedada qodobbkan oo aan ku nuuxnuuxsaddo, waxaa jirta beryahan danbe in siyaasadda soomaaliya bukootay oo uu madaxweynaha Uganda ku sheegay inay tahay political HIV ama siyaasadda cudurka Aidska. Runtii in sidaa Museveni yidhaahdo inaga ayaa isukeenay, oo dalkeeni dabka saarnay, markaa waxaad arkaysaa khilaaf iyo is maandhaaf aan dhamaanayn oo had iyo jeer soo noqnoqda sababahu waxay doonnaan ha noqdeene; Haddaba yaa khaldan? Yaa saxsan gartu labba nin kamawada qosliso?
Labba qof hadday is qabtaan, qof uun baa khaladka leh majirto mana dhici karto. “Hebela gar leh hebelka kalena gar leh”. Runtii soomaalidii hore waxay ahaayeen dad daacad ah oo gees kasta wixii laga weydiiyo runta ka sheegi jiray oo guurti ahaa oo guddi ahaa oo Rabigeena ka cabsanjiray Raggana runta aan kala biqi jirin waana sida ay kubaxday runtu ragga way kanixisaa waayo runtu way xanuun kulushahay kudilimayso, laakiin way kaa nixinaysaa markaa maanta soomaaliya mucaaraadka iyo muxaafaddka isku haya caqliga gal ma’aha wax caqliga saliimka ahana qaadan karo ma’aha labbaduba waa qaldanyihiin.
Anigoo aad ula socday xog fara badan dersay madhacayso inaan runta xannuunka baddan qariyo ama labaqo waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol mucaardku khaldanyahay sababtoo ah adduunka mucaarad waa kajiraa laakiin waa muccaarad dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo rabba inuu wax dhiso, laakiin ma’aha mucaarad rabba in inta qori laqaato oo ladagaalamo la burburiyo dalka oo dadka labara kiciyo oo qaxooti laga dhig. Tan labaad, ma’aha mucaarad dalkooda u basaasa wadamo kale ama rabba inay lasoo saftaan dadkale oo cadaw ku ah.
Haddaba, labbadaa sifo oo aan sheegay oo ah in mucaarad wax burburinaayo iyo inuu lasoo safto dalal shisheeye ah oo cadaw ah ayaa mucaaraadka Soomaaliya leeyihiin. Intaa waxaa u dheer, musuqmaasaq, qabyaalada iyo waxyaabo kale taas ayaa kadhigtay inay gardaranyihiin. Haddaba haddii ay dhacdo dawladda imminka soomaaliya ka Talisa, oo runtii caalamka oo dhan iyo Soomaalida badankeedu u qireen wanaag iyo horumar, oo mucaaraadku qabsadaan maxaa dhicikara oo aan filikaraa ama qiyaasikaraa? Siday ila tahay anigoo caqligayga gaaban ee miskiinka ah ku eegaya, waxaa dhicidoonta in imaaraadka iyo Kenya iyo mucaaraadku si fiican isugu xidhimidoonaan oo si fiican oo caaqib leh damaashaad iyo dabaaldeg u dhexdabaalan doonaan, laakiin Soomaaliya ay god dheer ku hubsandoonaan waayo imaaraadku dhaqaale xoog leh ayuu rabaa inuu kula wareego dekedaha Soomaaliya oo dhan, isagoo Kenyana dhaqaale siin doona si iyana danheeda uga qabsato Soomaaliya.
Waxaa kaloo jirta in Imaaraadku gacanta ku dhigidoono ciidamada Soomaaliya sababtoo ah dawladda Turkigu mucaaraadka Soomaaliya aad iyo aad ayey u taqaanaa, weliba waxay aad uga walaacsantahay musuqmaasaqa oo ay xoggo rasmi ah oo cad ay hayso; in haddii mucaaraadku yimaado la musuqmaasaqayo gargaarka, deeqaha iyo tababaradda ciidanka loogu diro turkiga markaa farraha ayaa turkigu kala baxayaa ciidamadda Soomaalida sidaas ayey ciidamada soomaalidu imaaraadka ugu xalaaloobayaan.
Intaa kadib, waxaa cirka isku shareeraya in lacagaha Imaaraadku bixiyo mucaaraadku isku qabsandoonaan oo tuugadda iyo musuqu baddan doonaan intay lacagta imaaraadka isku dilayaan ayaa Imaaraadku dekedaha gacan buuxda ku dhigidoonaa. Markaay sidaa u dhacdo oo wixii dawlada imminka joogtaa ay kahor joogtay ay mucaaraadku banaystaan, ayaa waxaa la arki doonaa dadka iminka dawlada iyo farmaajo neceb oo afka maantay ay dawladda iyo Farmaajo ku caayayaan iyagoo ku amaanaya.
Saadaal irmaan: M.M
← Biyo Xireenka Ceel daahir Wasiirka Qorsheeynta oo Gaaray Magaalada Dhahar →
1 thought on “Saadaal Irmaan”
jaamac September 23, 2021 at 07:17
Asc, Anigu iskuma tiriyo dadka ayagu isku sheega in dheergarad in ay yihiin laakiin waxaan xoogaa fahmi karaa qofka ujeed kiisu yahay marin habaabin ama ka isleh wax hagaaji, tusaale lacagta somaliya lugu qaribay waxaa ugu badan mida Dalka Qadar, taageerayaasha Farmaajo hadii arintaas lasoo qaado waxay leeyihiin waxaa tahay qaran dumis , taaiikhda inta la,ogyahay somaliya waxay xariir dhaqaale iyo midganasi la laheed “emaaraadka” dalaakan waxa uu noo ahaa marin iyo meel aan kashaqaysano Maantana waxa colaadiyay kooxda wariyhii hore Ee Tvga Aljazeera. Sidoo kale maantay waxa madaxa lasaartay Ethiopia, waxaana lariixay Kenya 2da dal waxa ay kala yihiin waxaad arki kartaa marka aad dhax tagtid Kenya waa dhul somaaliyeed runtii waxaana saas ka dhigay dadkeena, ayadana waxaa lagu yiri hadaanan Axmad Madoobe cayrin Waan kala tagnay, si kastaba ha ahaatee waxaan ku kalsoonahay Qof uu Yahaba kii Somaliya is yiraa jaqaf aad kushaqaysato kadhigo waxaa hubaal in Hoog iyo Halaag karaaci doono insha’alaah.